Maxay Sawirro Lagu Xereeyaa Faylka DCIM?
Qalab kasta oo Sawir-qaadista Dukumintiyadeed oo Isticmaalaya Faylka DCIM-laakiin Maxay tahay?
Haddii aad haysatid kamarad dijital ah oo nooc kasta ah oo aad ka bixisay wax walba oo ku saabsan sida ay u dukaameyso sawirada aad qaadatay, waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in lagu hayo faylka DCIM .
Waxa laga yaabo inaadan ogaanin in kamarad kasta oo dijital ah, ay tahay nooca jeebka ah ama noocyada DSLR xirfadleyda ah, waxay isticmaalaan isla buug.
Ma rabtaa inaad maqasho wax aad u yaab leh? Inta aad u badan tahay inaad isticmaasho barnaamijyada si aad u aragto, u rogto, uguna wadaagto sawirada aad qaadato casrigaaga ama kiniinadaada, sawiradaas waxaa sidoo kale lagu kaydiyaa keydka telefoonkaaga ee ku yaala qaybta DCIM.
Sidaa daraadeed maxaay tahay mid gaar ah oo ku saabsan buugan qeexan ee shirkad kastoo u muuqata in ay ogolaato waa muhiim in ay dhammaantood u isticmaalaan sawiradaada?
Sababtoo ah DCIM iyo ma '& Photos; & Photos;
DCIM waxay u taagan tahay Diiwaanka Dhacdooyinka Dijital, taas oo laga yaabo inay ka caawiso faylkan inuu dareen ka dhigo wax yar. Waxyaabaha ay ka mid yihiin Sawirada ama Sawirrada waxay noqon doonaan mid aad u cad oo sahlan, laakiin waxaa jira sabab loo doorto DCIM.
Magaca oo si joogta ah loogu kaydiyo sawirada sawir-gacmeedka ee kamaradaha dijitaalka ah sida DCIM ayaa lagu qeexay qayb ka mid ah DCF (Nidaamka Naqshadeynta Nidaamka Kooban Muuqaalka), kaas oo ay qaadatay kamarado badan oo sameeya in ay tahay ficil ahaan warshadaha.
Sababtoo ah nambarka DCF waa mid caadi ah, soo-saareyaasha gacanta software-ka gacanta ee aad haysatid kombiyuutarkaaga iyo qaabka sawir-qaadista iyo wadaagista barnaamijyada aad ku soo qaadatay telefoonkaaga, dhammaantood waxay barnaamijka ku raaxaystaan ​​qalabkooda si ay diiradda u saaraan dadaalka sawir-qaadista ee ku qoran faylka DCIM.
Kala duwanaanshahan waxay dhiirigelinaysaa kamarad iyo kuwa kale ee akhristayaasha, iyo sidoo kale, xitaa more, software iyo app developers, inay ku dhajiyaan caqligalka DCIM keliya.
Faahfaahinta DCF waxay ka badan tahay oo keliya in la qoro feylka sawirada loo qoray. Waxa kale oo uu sheegayaa in kaararka SD in ay isticmaalaan nidaam fayl gaar ah marka la qaabeeyey (mid ka mid ah nidaamyada FAT faylasha badan ) iyo magacyada faylasha iyo faylasha loo isticmaalo sawirada lagu duubay raacaan qaab gaar ah.
Dhammaan sharciyadan waxay ka shaqeynayaan sawiradaada qalabka kale iyo software kale, aad u sahlan marka loo eego haddii soo-saaraha kasta uu la yimaado sharciyadiisa.
Marka Faylkaada DCIM noqoto Diiwaanka DCIM
Iyadoo la tixgelinayo midnimada iyo qiimaha sawir kasta oo shakhsi ah oo aanu qaadan karno, ama uu awood u leeyahay inuu helo, khibrad gaar ah oo xanuun leh ayaa dhacaya marka sawiradaada ay baaba'aan sababo farsamo farsamo ah oo nooc ah.
Hal arrin oo dhici karta horaantii geedi socodka lagu riyaaqayo sawirada aad qaadatay waa musuqmaasuq feylka ku jira qalabka kaydinta-tusaale SD-ka. Tani waxay dhici kartaa marka kaarku weli ku jiro kamarad, ama waxay dhici kartaa marka la geliyo qalab kale sida kumbuyuutarkaaga ama qoraaga.
Waxaa jira sababo badan oo kala duwan sababta musuqmaasuqa sidaan u dhaco, laakiin natiijada waxay u egtahay mid ka mid ah saddexdan xaaladood:
Hal ama labo sawir lama arki karo
Ma jiraan wax sawiro ah oo ku saabsan kaarka
Faylka DCIM ma aha fayl laakiin waa hal, weyn, faylka
Xaaladda Xaaladda # 1, inta badan ma jiraan wax aad sameyn kartid. Qaado sawirada aad ka fiirin karto kaarka, ka dibna bedel kaarka. Haddii ay mar kale dhacdo, waxaa dhici karta inaad dhibaato ku heysato kamaradda ama aaladda sawir qaadista ee aad isticmaalayso.
Xaaladda # 2 waxay macnaheedu noqon kartaa in kamaraduhu aysan waligood qorin sawirada, markaa, beddelidda qalabku waa mid caqli badan, ama waxay macnaheedu noqon kartaa in nidaamka faylka la jabiyo.
Xaaladda # 3 markasta waxa loola jeedaa in nidaamka faylka la jabsaday. Si la mid ah sida # 2 iyo # 3 yihiin, ugu yaraan haddii warqada DCIM ay hayso faylal, waxaad dareemi kartaa inaad si fudud u raaxaysato in sawiradu ay jiraan, ma ahan kaliya foomka aad hadda heli karto.
Labada midkood # 2 ama # 3, waxaad u baahan doontaa inaad raadsato caawimo nidaam dayactir fayl ah oo loo yaqaan 'Magic FAT Recovery'. Haddii hannaanka nidaamka faylka uu yahay isha dhibaatada, barnaamijkan ayaa laga yaabaa inuu ku caawiyo.
Haddii aad nasiib u leedahay inaad hesho Magic Recovery Magic FAT, waa inaad hubisaa inaad dib u saxdo kaarka SD ka dib markaad taageereyso sawiradaada. Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa qalabka qaabka qaabeynta ee kamarad-dejinta ama Windows ama macOS.
Haddii aad naftaada u qaabeyso kaadhka, qaabee adigoo isticmaalaya FAT32 ama EXFAT haddii kaadhku ka sareeyo 2 GB. Nidaam kasta oo FAT wuxuu sameyn doonaa haddii uu ka yar yahay 2 GB.
Waa Maxay Kamaradaha Muujinta Lens Qeexida?
Hagaha Wajiyada Dukumiintiyada Fiidiyowga
Sawir Maxaa Kumbuyuutar ah Sawirka Sawirkiisu ku Tusayo
Sida Loo Daabiro Sawirada Si toos ah uga Joojiya Sawirada
Sida loo iibsado iPad
Waa maxay Aqoonsiga Aqoonsiga?
Dhibaatooyinka Xoogsatada Xoogga Korontada ee Xoogga ah
5 Siyaabaha loo abuuro Farshaxan 3D Isticmaalida Rinjiga 3D Toolbar
Dib u eegid lagu sameeyey Libratone Zipp iyo Zipp Mini AirPlay
Twitter Luqad: Twitter-ka iyo Qodobbada Muhiimka lagu sharaxay
Qorista Qoraallada Faragelinta Macalimiinta iyo Carruurta
Sidee loo hubiyaa Windows Mail ma kala qaybiyo emails
Dell Inspiron 531 PC Desktop Miisaaniyadda
10 Tilmaamaha wanaagsan ee Windows Editors HTML
La qabsashada Isku-xirka Wi-Fi - Sida Loogu Talagalay
Sidee ayaan u yareynayaa sawirrada isticmaalka internetka?
Sida loo siiyo Gift iPad App
Maxay yihiin Qalabka dayactirka?
Sida Loo fahmo Taariikhda iyo Waqtiga Meelaha Emailka
Iska baadho Dunida xiisaha leh ee Wii Homebrew
Abuurista Playlists leh iTunes Genius